Jainism - WRSP
Dị anya gara aga. Dabere na ọdịnala Jain, nke mbụ site na Tirthankaras nke iri abụọ na abụọ (mmadụ iri abụọ na anọ nwere nghọta bụ ndị na-apụta n'usoro mbara igwe iji kụziere ụzọ maka nnwere onwe) nwere nnukwu ndụ oge na oge gara aga ruo ọtụtụ ijeri afọ . Tirthankara nke ọ bụla nwere oge dị mkpirikpi karịa nke gara aga. Usoro nke ugbu a na - agwụ na Mahavira, nke iri abụọ na anọ, onye edere ka ọ dịrị ndụ afọ iri asaa na abụọ.
2600-1900 TOA. Akụkụ dị elu nke Harappan, ma ọ bụ Indus Valley, Civilization. Scholarsfọdụ ndị ọkà mmụta Jain na-ahụ njikọ dị n'etiti ọdịbendị nke Indus Valley Civilization, dị ka ọ pụtara na ihe ochie ya, na Jainism, na-atụ aro na ụfọdụ ihe
gosi Rishabha, ma ọ bụ Adinatha, nke mbụ Tirthankara, na ịkọ nkọ na Rishabha bụ onye ọdịbendị dị mkpa maka-na ikekwe ọbụlagodi onye guzobere – mmepeanya a (Parikh 2002).
1500-1000 TOA. Otụ ọkà mmụta mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nke mejupụtara nke Vedas, nke bụ ihe odide mbụ dị nsọ nke ọdịnala Hindu. Ntughari aka Rishabha na Arish ṭ anemi na Rig Veda ụfọdụ ndị ọkà mmụta Jain weere ka ha zoo aka na Tirthankaras nke mbụ na nke iri abụọ na otu.
877-777 TOA. Omenala mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke Tirthankara nke iri abụọ na atọ, Parshvanatha, nke ndị Jain na ndị na-abụghị ndị Jain mere ka ha bụrụ onye mere eme n'ezie.
599-527 TOA. Omenala mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke Mahavira, iri abụọ na anọ (na nke ikpeazụ) Tirthankara nke oge anyị ugbu a. Enyere aha Mahavira bụ Vardhamana Jñatriputra. Mahavira bụ mkpụrụokwu nke pụtara "Nnukwu Dike," na-ezo aka n'omume ịkpa ọchị dị egwu ya.
499-427 TOA. Mkpakọrịta nke Mahavira dị ka agụmakwụkwọ ugbu a, nke na-etinye oge Buddha, onye dịkọrọ ndụ nke Mahavira, otu narị afọ gachara karịa isi mmalite ọdịnala.
327 TOA. Alexander nke Macedon wakporo ebe ugwu ọdịda anyanwụ India, na -emepụta ikike ikike nke Chandragupta Maurya nke Magadha na-erigbu.
320-293 TOA. Ọchịchị Chandragupta Maurya, onye guzobere Dynasty nke Maurya, nke otu ọdịnala Jain nwere bụ onye Jain nkịtị. Dabere na otu akụkọ, ọ hapụrụ ọbụbụeze na mbubreyo wee bụrụ onye mọnk Jain, na-anwụ n'ihi agụụ afọ ofufo na saịtị Jain nke SHravana Be ḷ go ḷ a (na steeti India nke oge a Karnataka). Scholarsfọdụ ndị ọkà mmụta na-atụ aro na akụkọ a na-ezo aka na onye ọchịchị Maurya ikpeazụ, Samprati Chandragupta, onye dịrị ndụ n'ihe dị ka 200 TOA.
c. ihe 200 TOA. Ndị Jain na-amalite ịkwaga gafere mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ nke India na ndịda na ọdịda anyanwụ. Nke a nwere ike bụrụ ihe ga - eme ka ndị Jain mechaa banye na ngalaba ha Shvetambara (nke kachasị na ọdịda anyanwụ India, na steeti Gujarat na Rajasthan nke oge a) na ngalaba Digambara ha (nke kachasị na Karnataka na Maharashtra, n'agbanyeghị na ebe ahụ) Ogologo oge a bụ ugwu Digambaras). Nke a bụkwa oge nke ihe mejupụtara akụkụ Akwụkwọ Nsọ kacha ochie Jain.
c. ihe 100-200 OA. Umasvati, onye dere akwukwo Tattvartha Sutra, nchịkọta nke nkuzi Jain ka Shvetambara na Digambara Jains nyere ikike. Nke a bụkwa oge nke ọgba aghara dị n'etiti obodo Jain abụọ a.
c. ihe 200-300 OA. Ndụ nke Kundakunda, onye dị mkpa Digambara ọkà ihe ọmụma na ihe omimi.
c. ihe 700-800 OA. Ndụ nke Haribhadra, onye ọkà ihe ọmụma Shvetambara maara maka ụzọ dịgasị iche iche nke ọdịnala ndị na-abụghị Jain si dabere na nkuzi Jain anekanta-vada, ma ọ bụ “ozizi na-abụghị otu akụkụ.”
1089-1172 OA. Ndụ nke Hemachandra, onye ama ama Shvetambara, onye ọkọ akụkọ ihe mere eme, na onye ọgụgụ edemede.
1000-1200 OA. Oge nke nnukwu temple Jain na oge nke Jain “oge ọla edo” nke nka, ihe owuwu ụlọ, edemede na nkà ihe ọmụma nke malitere na Umasvati.
c. ihe 1400-1500 OA. Ndụ nke Lonka Shah, Jain na-eme mgbanwe jụrụ ofufe nke ihe oyiyi (murtipuja) ma kpalite mmụọ nsọ otu abụọ Shvetambara, Sthanakavasis na Terapanthis.
1867-1901 OA. Ndụ Rajacandra Maheta, onye ndụmọdụ ime mmụọ na Mahatma Gandhi. A na-amata ngagharị nke ndị na-eso ụzọ ya Kavi Panth.
1889-1980 OA. Ndụ nke Kanji Svami, onye guzobere Kanji Svami Panth, òtù Jain nke oge a na-adaberekwa na ihe omimi nke Kundakunda.
1970 OA. Onye mọnk Shvetambara, Chitrabhanu, ghọrọ onye mbụ mọnk na akụkọ ntolite nke oge a iji mebie iwu ọdịnala na njem esenidụt iji gbasaa ụkpụrụ Jain n'ụwa niile. N'oge na-adịghị anya, Sushil Kumar na-esochi ya na 1975 bụ onye, ​​na 1983, guzobere Siddhachalam, ụlọ ọrụ Jain na Blairstown, New Jersey.
1914-1997 OA. Ndụ nke Acharya Tulsi, onye ndu nke Terapanthi Shvetambara Jains onye sụrụ ụzọ Jainism. O guzobere Jain Vishva Bharati, ebe a na-amụ banyere okpukpe Jain, n'obodo Ladnun, Rajasthan, na anuvrat movement - otu mgbochi nrụrụ aka bu n'uche iji iwebata ụkpụrụ Jain na India na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa. Na 1980, o guzobere saman na Samani iwu nke ascetics ndị ejikọghị site na mgbochi ọdịnala maka njem maka ndị mọnk Jain na ndị nọn, iji mee ka Jain ascetics mee ụdị ọrụ ụwa niile nke Chitrabhanu na Sushil Kumar sụrụ ụzọ, n'agbanyeghị agbanyeghị esemokwu na nkwa ndị mọnk ha.
c. ihe 1900-ugbu a. Obodo Jain na-aghọwanye mba ụwa, na njem Jain gaa n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, ọkachasị Britain na North America, na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ụlọ nsọ na ụlọ ọrụ Jain ndị ọzọ na-eguzobe na mpụga India.
Jains jidere Jainism ka ọ bụrụ mkpokọta nke eziokwu ebighi ebi na nke na-agbanweghi agbanwe, ya mere, na-ekwusi ike, ka ị ghara inwe akụkọ ihe mere eme, n'echiche nke mbido oge. Jains, n'ozuzu, na-eche banyere akụkọ ihe mere eme nke ọdịnala ha na "Universal History, nke na-enye nkọwa na oke oke akara aka, nke edepụtara maka oge buru ibu, nke ndị nkuzi Jain iri abụọ na anọ, ndị na-emebi iwu [a na-akpọ Tirthankaras], na ndị ha na ha dịkọrọ ndụ (Dundas 2002: 12). ” Ọbụna akụkọ ihe mere eme na Universal Universal bu ihe osise nke obere uzo nke ndu ebighi ebi dika echeputara na Jainism.
Otu nwere ike ịchọta akụkọ ihe mere eme nke obodo Jain ugbu a na Mahavira na onye bu ya ụzọ, Parshvanatha – nke iri abụọ na anọ na iri abụọ na atọ Tirthankaras. Tirthankaras bụ mmadụ iri abụọ na anọ na-apụta n'okirikiri, ma ọ bụ kalpa, iji nwugharia na imeghari uzo nke nnwere onwe site na okirikiri karma na nlọghachi.
Ma Parshvanatha na Mahavira bụ ndị ndu nke usoro ịta ahụhụ nke malitere na mpaghara ugwu nke India na narị afọ iri mbụ TOA. Nke a shramana ma ọ bụ ọtụtụ ndị na-agba mbọ “na-agba mbọ” mejupụtara ya bụ obere ngalaba (gụnyere ndị Buda). Echiche e kere eke nke otu a bụ nke ịta ahụhụ, nke nnwere onwe pụọ nhụjuanya na-enweta nanị site na nnwere onwe site na usoro ọmụmụ. Nke a na-enye ume site na karma, nke na-eme ka ndị mmadụ na-enweta nsonaazụ nke omume ha, nke ọma na nke ọjọọ. Omume ziri ezi omume na-eduga na ahụmịhe na-enye obi ụtọ na omume rụrụ arụ na-eduga na ahụmịhe na-adịghị mma. N'ihi na otu ndụ anaghị ekwe ka oge zuru ezu iji nweta nsonaazụ ndị a niile, ịmaliteghachi dị mkpa. Nke a na-akọwakwa ihe mere eji amụ mmadụ n'ọnọdụ dị iche iche. Ihe ndabara bu n'ihi omume oma gara aga na ihe ojoo na omume ojoo gara aga.
Ọbụna ọrụ dị mma na-arụpụta nsonaazụ na-adịgide adịgide, nke mere na enweghị afọ ojuju. Ọnọdụ nke ezi ọ andụ na-adịgide adịgide naanị na-abịa mgbe mmadụ nweere onwe ya pụọ ​​na nsonazụ kama. Nnwere onwe dị otú ahụ bụ ebumnuche nke ọdịnala shramana. N'agbanyeghị ọdịiche dị iche iche na-ekewa ụzọ ha banyere nsogbu a, ha niile na-ekerịta echiche ahụ na mmadụ ga-ewepụ onwe ya na ọha mmadụ yana site na ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma ọ bụrụ na mmadụ ga-enweta nnwere onwe zuru oke, na-etinye ndụ na ndụ nnabata na ntụgharị uche.
Echiche nke shramanas dị iche na nke ndị isi ha na ya bụ isi, ndị Brahmins, ndị kwadoro ọdịnala Vedic oge ochie. Na mbu ederede Vedic mmadu achoputaghi okwu karma na nlọghachi, ma obu ezigbo nnwere onwe site na omumu. Ebumnuche ndị a, nke ọdịnala Brahmanical na shramana na-ekerịta, na-apụta na akwụkwọ Vedic naanị oge na-adịghị anya, na usoro mkparịta ụka nkà ihe ọmụma a na-akpọ Upanishads, nke mejuputara n'otu oge nke shramana ije si puta. Dika nkwenye Brahmanical si di, otu uzo nke mgbanwe ime mmuo nke mmadu, ya na idi nso nke ihe mgbaru ọsọ nke nnwere onwe, bu ulo oru nke onye ahu, ma obu varna–Mgbe a maara ebe niile dị ka “ọgbụgba” –onye kachasị elu nke ndị Brahmins n'onwe ha. Ndị Brahmins bụ ndị ụkọchukwu nke okpukpe Vedic, ụfọdụ ememme ha n'oge ochie gụnyere ịchụ ụmụ anụmanụ n'ọkụ dị nsọ. Na Brahmanical worldview, ndị Brahmins dị mkpa iji debe usoro nke mbara igwe, n'ihi na ọrụ ha na-eme mgbe niile nke Vedic bụ isi ihe na-akwado iwu a, ọ bụ naanị ha ruru eru ime ya. Ndị nkuzi SHramana, n'aka nke ọzọ, kwenyere na caste bụ ụlọ ọrụ nke mmadụ mepụtara maka mmezi nke ọha mmadụ, na ọ bụghị ihe ngosipụta nke mmalite nke mmụọ. Onye obula, nke ndi obula, onye tinyere mgbali zuru oke nwere ike nweta karma karie na imu ozo ma nweta nnwere onwe. Àjà anụmanụ, Ọzọkwa, na-emebi ụkpụrụ nke enweghị ike (ahimsa), idebe ihe dị mkpa iji nweta nnwere onwe. Ndi otu SHramana dika ndi Jain na ndi Buddhist juru aju na ncheta omumu nwere nmekorita obula na ndu ime mmuo - obu ezie na ha aju ajuju nke ndi otu a dika udi ndokwa. Ha jụkwara ememe nke àjà anụmanụ, ma na-ejigide ọtụtụ okwu Vediki ma na-asọpụrụ chi Vedic, dị ka Indra. Ọ dị mfe ikwu na Jains na Buddhist “jụrụ ajụ,” dị ka a ga-asị na ha bụ ndị na-achọ mgbanwe n’etiti ọha mmadụ; n'ihi na obodo abụọ ahụ gara n'ihu na-ahazi onwe ha n'òtù, na Jain na-ahọrọ ndị di na nwunye, dịka ọmụmaatụ, na-adabere n'ọgba aghara ruo taa. Ọ dịkwa mfe iji tụnyere ọdịnala oge ochie nke Brahmanical nke Mahavira na Buddha lụrụ na Hindu nke narị afọ ndị gara aga, na nke oge a. N'ihi na ọ bụ ezie na ndị Hindu nọgidere na-agbasi mbọ ike na ọdịnala Vedic, ọtụtụ ndị Hindu (dị ka ịchụ anụmanụ) ajụwokwa ọtụtụ omume ndị a jụrụ shramanas, na mmegharị Hindu apụtala kemgbe ọtụtụ narị afọ ndị jụrụ njirimara nke evolushọn ime mmụọ na caste.
Amụrụ na ezinụlọ eze na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ nke India a maara dị ka Greater Magadha (Bronkhorst 2007), mgbe ọ dị afọ 30, Mahavira họọrọ ịhapụ ọkwa ya n'ịchọ ụzọ maka nnwere onwe site na usoro ọmụmụ na nnwere onwe ịta ahụhụ maka mmadụ niile. . Mgbe afọ iri na abụọ nke ị gụ ọgwụ ike na ị ascụ ọgwụ ọjọọ siri ike, ọ nwetara ọnọdụ nke nnwere onwe zuru oke na ihe ọmụma a maara dị ka kevala jana.
N'ime afọ iri atọ sochirinụ, Mahavira mepụtara ndị na-esote ndị mọnk, ndị nọn, na ndị nkịtị bụ ndị ghọrọ ntọala nke obodo Jain. Omenala Shvetambara na Digambara Jain dị iche na nkọwa nke oge a. Akwụkwọ nsọ Shvetambara gosipụtara Mahavira dị ka onye nkuzi nke amamihe pụrụ iche, mana dịka mmadụ na-eme ihe omume ndị a dịka ikwu okwu na ịgagharị site n'otu ebe ruo ebe. Otú ọ dị, dị ka ọdịnala Digambara si kwuo, Tirthankara, mgbe ọ ga-enweta kevala jñana, ọ dịghị eme ihe ọ bụla ma na-ezi ihe site na ụda olu dị nsọ nke a na-akpọ divyadhvani nke ndị na-eso ụzọ ya tụgharịrị ka echiche dị mfe nghọta.
Mgbe ọ dị afọ 72, Mahavira nwụrụ na Pavapuri, n'alaeze oge ochie nke India nke Magadha, nke dị na steeti India nke oge a bụ Bihar.
Na ndụ Mahavira, dị ka omenala Jain si kwuo, o guzobere obodo anọ dị iche iche nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ndị nwe ụlọ na-adịgide ruo ugbu a. N'ime otu narị afọ na-eso Mahavira, obodo Jain mbụ a bụ otu n'ime ọtụtụ ụdị shramana dị n'akụkụ ibe ha na obodo Brahmanical dị na mgbago ugwu India. O doro anya na obodo ndị a ejikọtaghị ya na ya. Otu akụkụ nke ọdịbendị ọdịnala nke South Asia bụ ihe dị ogologo nke "oghere a na-emeghe" (Cort 1998), nke ndị otu okpukpe okpukpe na-agakarị ma na-esonye na ụlọ ọrụ, ememe, na mmemme nke ndị ọzọ. Echiche nke iche naanị na okpukpe bụ nchedo nke "ndị ọkachamara n'okpukpe" - ya bụ, ascetics na ndị ụkọchukwu-na-adịghị ọbụna mgbe niile hụrụ n'etiti ndị a.
Na 327 TOA, site na mwakpo Alexander nke Macedon na northwest India na enweghị ikike nke ndị a kpatara n'etiti ndị isi nke mba ndị na-asọrịta mpi India, usoro ihe omume malitere nke ga-enwe nnukwu nsonazụ maka ọdịnala shramana. N'iji ohere ikike a mee ihe, Chandragupta Maurya, eze Magadha, meriri ọtụtụ ebe ugwu India, guzobe usoro ndị ọchịchị Maurya.
Ndị ọchịchị Maurya na-akwado ọdịnala shramana ahụ (agbanyeghị, na-agbaso ụkpụrụ "oghere ghere oghe", abụghị naanị na nke a). Nlekọta a rụpụtara ọtụtụ ihe onwunwe ka enyere ndị otu dị ka ndị Jains na Buddhist (ndị nke abụọ bụ ihe pụrụ iche nkwado nke nwa nwa Chandragupta, Ashoka). Institutionslọ ọrụ ndị mọnk pụtara na Jain na Buddha akụkụ Akwụkwọ Nsọ, bụ ndị a na-ebu ụzọ ebu ụzọ kwuo okwu, malitere ide ụdị.
Dị ka otu ọdịnala si kwuo, Chandragupta n'onwe ya bụ onye Jain nke nọrọ afọ ikpeazụ nke ndụ ya dị ka onye mọnk na saịtị njem njem Jain nke SHravana Be ḷ go ḷ a, na ndịda Indian mpaghara Karnataka. Nkuzi odi nso n’egosiputara na akuko a narutu aka na Samprati Chandragupta, nwa nwa Ashoka na eze Mauria nke ikpeazu (Wiley 2004: 51). Akụkọ a na-ekwu maka ụnwụ nri dị na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Alaeze Ukwu Maurya nke dugara ọtụtụ ndị Jain ịkwaga na ndịda na ọdịda anyanwụ, ebe ọtụtụ ndị Jain bi kemgbe oge ochie. Enwere ndị Jain ole na ole taa na ala nna nke ugwu ọwụwa anyanwụ nke ọdịnala a, mana ọtụtụ ndị Jain na steeti ndịda nke Karnataka na steeti ọdịda anyanwụ dịka Gujarat, Rajasthan, na Maharashtra. E nwekwara nnukwu obodo oge ochie nke Jain na steeti ndịda nke Tamil Nadu na steeti ọwụwa anyanwụ nke Orissa.
A na-ekwu ụnwụ nri a na mbugharị abụọ, na-ekewapụta obodo Jain na mpaghara ndịda na ọdịda anyanwụ, mgbe ụfọdụ edepụtara dị ka isi ihe kpatara schism na-esote n'etiti ngalaba abụọ nke Jainism: ndị Digambaras (nke kachasịkarị na ndịda, n'agbanyeghị na e nwere ndị otu Digambara dị na northwest nakwa) na Shvetambaras (nke kachasị naanị na mpaghara ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke India).
Puku afọ na-esote, mgbe Shchambara-Digambara schism gasịrị, bụụrụ ihe “oge ọla edo” maka obodo Jain, bụ nke tozuru etoju na mpaghara ugwu na ọdịda anyanwụ. N'adịghị ka okpukpe Buddha, na nke dị iche na nnyefe ọdịnala Hindu na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, ebupụtaghị Jainism n'èzí India ruo oge nke oge a, n'ihi mmachibido mmegharị a na-ebo ndị Jain ascetics niile-ndị achọrọ ịga ụkwụ ebe niile. ekweghi ka njem na njem ndi ozo n'ihi nsogbu nke ndi a na-eweta obere ndu. N'ime India, agbanyeghị, ndị Jain ghọrọ obodo pere mpe nke ukwuu. N'ịbụ ndị dọtara, site na oge mbụ, ihe ka ukwuu n'ime ndị na-esote site na obodo ndị ahịa, Jains achọpụtala na a ga-achọpụta ha dịka obodo azụmaahịa na akụkọ ntolite India. N'agbanyeghị obere ọnụọgụ ha, akụnụba nke ndị Jains, yana nkwanye ugwu nke nlebara anya nke omume Jain, mere ka ha nwee mmetụta na ọdịnala ndị India karịa nke ilekwasị anya na ọnụọgụ nwere ike ịkọwa. Narị Afọ Iri mbụ nke Oge Anyị bụ oge nke ihe ọma Jain rụzuru na akwụkwọ, nkà ihe ọmụma, ụkpụrụ ụlọ, na ihe nkiri, na-ewu ọtụtụ ụlọ arụsị Jain a ma ama n'oge a. Buildinglọ ụlọ nsọ ghọrọ, ma bụrụ, ụzọ a ma ama maka ndị Jain bara ọgaranya iji nweta uru nke okpukpe, yana akụ na ụba nke etinyere n'elu ụlọ ndị a bụ akara ngosi pụtara ìhè, maka ndị na-abụghị, nke akụ na ụba nke obodo n'ozuzu (nke ọzọ na-achọ igbochi ngosipụta nke akụ na ụba).
N’ihe banyere nkà ihe ọmụma, ndị nkwado a ma ama n’oge a gụnyere Umasvati, narị afọ nke abụọ dere Tattvartha Sutra, Nchịkọta nke nkuzi Jain nke e jidere na Digambara na Shvetambara Jains nwere ikike. Isi nkuzi Jain agbaghaala nke ọma site na nkọwa Umasvati gafere ọtụtụ ngalaba Jain dị iche iche, na ọtụtụ narị afọ. Ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti ndị Jain, gụnyere Digambara na nkewa Shvetambara, dị ka anyị hụworo, lekwasịrị anya na nkọwa nke omume, ọ bụghị n'okwu nke nkwenkwe bụ isi.
Ndị ọzọ Jain maara ihe n'oge a gụnyere Kundakunda, onye Digambara bụ onye nkuzi ya gụnyere ihe omimi nke mysticism. Kundakunda na-ekwuputa nsụgharị Jain nke "eziokwu abụọ" nkuzi ahụ a na-ahụ n'akwụkwọ Buddhist nke Nagarjuna na Advaita Vedanta ọdịnala Hindu nke Shankara na-aga n'ihu. "Eziokwu abụọ" bụ eziokwu nke a na-ahụkarị, nke a pụrụ igosipụta n'okwu ma nwee echiche ụwa bụ isi nke ọdịnala a na-ekwu maka ya, na eziokwu kachasị nke karịrị okwu ọnụ, nke echiche ụwa nke ọdịnala na-atụ aka na n'ụdị ezughị oke.
Kundakunda na-esochi Haribhadra (ihe dị ka 700-800 OA), onye so na usoro ọgụgụ isi nke ndị Jain nwere “nkuzi banyere mmekọrịta”. Dịka ozizi ndị a si dị, ọdịdị nke eziokwu dị mgbagwoju anya na-enye ohere maka nkọwa dịgasị iche iche. N'aka Haribhadra, nkuzi a ghọrọ ihe ziri ezi maka ịkọwa ọtụtụ ụzọ na ịnakwere nkuzi nke ụlọ akwụkwọ ndị Hindu na Buddhist (Chapple 2003).
Site na otutu mwakpo nke India site na ike ndị mba ọzọ nke na-amalite na njedebe nke puku afọ iri mbụ nke oge nkịtị wee gaa n'ihu ruo oge Mughal (nke malitere na narị afọ nke iri na ise), akụnụba nke obodo Jain belata ntakịrị. Ndị obodo na-aga n'ihu na-enwe ọganihu na akpa nke India ebe a nabatara ọnụnọ ha ma nabata ọdịnala ha pụrụ iche; ma ogo ọgụgụ isi na ụkpụrụ ụlọ na-ebelata site n'oge gara aga ọ na-amị mkpụrụ, na enwere ụfọdụ ụlọ arụsị ndị Jain dabara na ihe mbibi nke ndị mwakpo ahụ.
Ejirila narị afọ gara aga mara nnukwu ihe, dị ka mmalite nke obodo Jain zuru ụwa ọnụ (n'ihi mmụba ndị India na-eme na mba ọzọ na-arịwanye elu), ịrị elu nke ndị nkuzi Jain na-adọrọ adọrọ na-ezi ụzọ ndị na-emesi ọnọdụ ime mmụọ ike na ndị mmadụ n'otu n'otu na usoro nke Jainism, na ịrị elu nke neo-orthodoxy – ụzọ dị oke mkpa iji hụ Jainism ka o kwekọrọ na sayensị.
Obodo Jain zuru ụwa ọnụ na-ebute mkpa maka obodo ndị mọnk zuru ụwa ọnụ iji kụziere ma nye mmụọ sitere n'aka mmụọ ndị nwe ụlọ, yana echiche nke Jainism dị ka ọdịnala ụwa niile, yana nkuzi na nghọta dị oke mkpa maka nsogbu nke oge a dịka egwu nke agha nuklia na mmebi gburugburu ebe obibi, tinyere esemokwu na-aga n'ihu n'etiti okpukpe dị iche iche nke ụwa. Na 1970, onye mọnk Shvetambara akpọ Gurudev Chitrabhanu chere na ọ dị mkpa ịgbasa ụkpụrụ Jain n'ụwa niile wee bụrụ onye mọnk mbụ na akụkọ ntolite nke oge a iji mebie iwu ọdịnala na njem esenidụt, na-aga ogbako banyere okpukpe ụwa na Mahadum Harvard. Onye sochiri ya bụ Sushil Kumar, onye mọnk nke bịara US na, na 1983, guzobere Siddhachalam, ụlọ ọrụ Jain na New Jersey.
Ka ọ dị ugbu a, Acharya Tulsi, onye isi ndị mọnk nke Terapanthi Shvetambara Jains na ọkara nke narị afọ nke iri abụọ rụrụ ọrụ mmekọrịta ọha na eze Jainism. O guzobere Jain Vishva Bharati, ebe a na-amụ banyere okpukpe Jain, n'obodo Ladnun, Rajasthan, na anuvrat movement - otu mgbochi nrụrụ aka bu n'uche iji iwebata ụkpụrụ Jain na India na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụwa. Na 1980, o guzobere saman na Samani iwu nke Jain ascetics. Ndị ascetics a, bụ ndị enwere ike ịkọwa ụdị ndụ ha dị ka usoro dị n'etiti ndụ nke onye nwe ụlọ Jain na ịchụso iwu zuru oke nke onye mọnk "zuru ezu" ma ọ bụ nọn, enweghị ihe mgbochi ọdịnala na njem maka ndị mọnk Jain na ndị nọn. Nke a na-enyere ha aka ịrụ ụdị ọrụ zuru ụwa ọnụ nke Chitrabhanu na Sushil Kumar sụrụ ụzọ na-enweghị nsogbu na nkwa ndị mọnk ha.
Obodo Jain na-eto eto na mba ndị dị ka US na Britain, yana njikọta mbata na ọpụpụ nke ndị India, edugawokwa ntopute nke ụdị ụlọ ọrụ ọhụụ anaghị ahụkarị na India, mana dabara na ụkpụrụ Indian oge ochie nke "oke oghere ”: Ụlọ arụsị“ Hindu-Jain ”. Institutionslọ ọrụ ndị a na-eje ozi ma ndị obodo Jain na ndị Hindu ma nye ohere ka ndị otu Indian kachasị nwee ike iji akụ na ụba ha na-akpata otu ihe iji chekwaa omume okpukpe na ọdịnala ha na ala ebe otu abụọ ahụ pere mpe nke ọnụ ọgụgụ mmadụ dum (Long 2009: 4) -13).
Ndị nkuzi mara mma nke oge a bụ ndị sụworo ụzọ dị omimi, na-agakwuru Jainism gụnyere Kanji Svami (1889-1980), onye guzobere Kanji Svami Panth, nke dabere na nkuzi nke Kundakunda, na Rajacandra Maheta (1867-1901) . Maheta, nke a na-akpọkarị SHrimad Rajacandra ma bụrụ onye nkwanye ùgwù, bụ onye ndụmọdụ kacha nso nye Mohandas K. (“Mahatma”) Gandhi. A na-akpọkarị "Gandhi's Guru," Ozizi Maheta na ihe atụ nwere mmetụta miri emi n'echiche Gandhi-ọkachasị banyere nrụgide ya na enweghị ike na mkpa mgbanwe onwe onye dị ka ihe dị mkpa na mbọ ọ bụla ịgbanwe ụwa (Long 2009: 78-79) .
Dabere na nkwenkwe Jain nke ọdịnala, eluigwe na ụwa adịla adị ma ọ ga-adịkwa ọzọ. Onweghi onye kere ihe. Ma ọ ga-abụ ihie ụzọ ikwubi na Jains bụ ndị na-ekweghị na Chineke, n'echiche nke ịghara ikwenye na ike ka elu ma ọ bụ nke na-abụghị ihe onwunwe. Enwere echiche nke Chi na Jainism. Eziokwu a nke sitere n'aka Chineke abụghị onye okike, agbanyeghị, mana ọ bụ njirimara nke mkpụrụ obi niile. Chineke, maka Jains, bụ mkpụrụ obi ọ bụla a tọhapụrụ ma chọpụta ọdịdị ya dị ka ọissụ na-enweghị ngwụcha, ihe ọmụma, ume, na nghọta.
Ya mere, Chineke ọ bụ otu ma ọ bụ ọtụtụ na Jainism? Ozo, Chineke bu nkpuru obi obula nwerela ntohapu. “Mkpụrụ obi ọ bụla dị n'otu izu oke, otu a enweghịkwa iche na mkpụrụ obi ọ bụla ọzọ. N'ihi njirimara a nke izu okè, enwere ike ịghọta Chineke maka ndị Jain. N'ihi na e nwere ọtụtụ mkpụrụ obi ndị a tọhapụrụ atọhapụ, a pụkwara ịghọta Chineke dị ka ọtụtụ (Cort 2001: 23). ”
Ebumnuche bụ isi nke ndụ, dị ka Jain si kwuo, bụ ịghọta ịdị nsọ nke mkpụrụ obi onwe ya. Mkpụrụ obi bụ chi Chineke – ọ intụ zuru oke ma zuru oke. Agbanyeghị, ekpughere chi a site na ọtụtụ oge site na nsonazụ kama. Na nghọta Jain, karma abụghị naanị ụkpụrụ nke nsogbu omume dị na ọdịnala ndị ọzọ Indic, dị ka okpukpe Hindu, Buddha, na Sikhism. Ọ bụkwa ihe ahụ na-akpụ usoro nke ụkpụrụ a na-arụ ọrụ. Karma, n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, bụ “ihe” na Jainism: ụdị adịghị ama ihe, “adịghị ebi ndụ” (ajiva) nke na-agbaso mkpụrụ obi dị ndụ,jiva). Karma dị iche iche. Offọdụ n'ime ya na-ewepụta ahụmịhe na-enweghị obi ụtọ na ụfọdụ n'ime ya na-ewepụta ahụmịhe na-enye obi ụtọ. Ofdị karma nke na-adọta mkpụrụ obi mmadụ dabere na omume mmadụ na-eme na agụụ nke soro ya.
Nke a bụ isi ihe dị mkpa. Ọ bụghị naanị ọrụ ọma ma ọ bụ ihe ọjọọ na-adọta karma ma ọ bụ ajọ mmụọ na mkpụrụ obi. Mmasị (raga) ma ọ bụ ogo nke otu onye ji eme ihe bụ isi ihe dị mkpa. Ime ihe ike iwe, agụụ iwe na-egosipụta n'ụdị echiche, okwu, ma ọ bụ omume na-emerụ ahụ bụ nke kachasị njọ, na-adọta ụdị karma dị egwu ma na-egbu mgbu nye mkpụrụ obi. Omume udo, iji belata nhụjuanya ma ọ bụ imere ndị ọzọ ihe ọma, na-eweta ezigbo karma na mkpụrụ obi. Agbanyeghị, ebumnuche kacha mkpa bụ ịnwepụ onwe ya na karma niile. Ya mere, mmadu agha gbalie ike iji obi uto wezuga onwe ya, ma ghara ichegbu onwe ya banyere ihe esi nolu mmadu puta, iji nweta onodu nke nnwere onwe zuru oke.
Omume na omume nke Jain gbadoro anya n'ịzụlite ọnọdụ nnabata, yana ịgbanye karma nke na-agbaso mkpụrụ obi ugbu a. E gosipụtara ụkpụrụ omume nke Jainism na nkwa ise. Ndị mmadụ na-ewere ndụ ndụ nke onwe ya, ya mere na-achọ inweta nnwere onwe n'oge na-adịghị anya, na-agbaso nsụgharị nke nkwa ndị a nke siri ike ma sie ike dịka mmadụ nwere ike. Ndị Laypersons, ndị nwere ike ịhụ nnwere onwe dị ka ebumnuche siri ike ma dị anya, ma lekwasị anya kama inweta ezigbo ọdịmma n'oge dị nso, n'ụdị ezigbo karma (ma ọ bụ belata karmic ibu n'ozuzu) ga-agbaso obere ihe na-achọ (ọ bụ ezie ka dikwa ike) nsụgharị nke ụkpụrụ ndị a (ọ bụ ezie na ha na-eme ha n'ezie, dịka nkwa ha, dịgasị iche). Dị nkwa ndị mọnk kwere ndị mọnk ka a na-akpọ a mahavrata, ma ọ bụ oké nkwa. Onye nkịtị na-eso ndị a anuvratas, ma ọ bụ nkwa dị obere. Nkwa ise ndị a bụ:
1. ahimsa: enweghị echiche, okwu, na omume
2. satya: ikwu eziokwu
3. asteya: abụghị nke na-ezu ohi
4. brahmacharya: mgbochi na mpaghara nke mmekọahụ
5. aparigraha: enweghị ikike, ma ọ bụ mgbakwunye
Nnukwu nkwa nke ahimsa gụnyere omume siri ike nke enweghị ike na-egosi ndụ ndị mọnk Jain ma ọ bụ nọn, ụfọdụ n'ime ha na-eyi a muhpatti , ma ọ bụ ọta ọnụ, iji zere ị formsụ obere ihe ndị dị ndụ. Nkwa pere mpe, n’aka nke ọzọ, enweghị ịkpachapụ anya gbuo ihe ọ bụla dị ndụ, na idobe nri onye anaghị eri anụ. Nnukwu nkwa nke brahmacharya gụnyere alụghị nwanyị maka ascetics, mana ntụkwasị obi alụmdi na nwunye maka ndị nkịtị. Nkwa nke aparigraha enwetaghị inwe ihe ọ bụla ọbụla maka ascetics, ndị anaghị eji teknụzụ "nwere" ihe ha ji eme ihe, dị ka whisk na-eme emume, nnukwu efere, yana, n'ihe banyere ascetics Shvetambara, uwe. Maka ndị nkịtị, obere nkwa nke aparigraha gụnyere ibi ndụ naanị na izere anyaukwu ma ọ bụ imebiga ihe ókè n'ihe gbasara ibi ndụ okomoko.
Otu nwere ike ịjụ, ọ bụrụ na ebumnuche bụ akụkụ nke ihe na-adọta karma na mkpụrụ obi, gịnị kpatara Jain ascetics ji echegbu onwe ya na izere ihe ọghọm nke ihe dị ndụ. Azịza ya bụ na, ọ bụrụ na mmadụ amata na e nwere obere ihe dị ndụ ebe niile na mbara igwe, dịka ikuku ikuku na-eku ume ma ọ bụ mmiri ọ responsibleụ responsibleụ, otu onye ga-abụ ihe kpatara ịghara imerụ ha ahụ. O doro anya na ịma ụma igbu mmadụ dị njọ karịa mmerụ ahụ mberede. Agbanyeghị, imebi ihe site na ịgagharị n'ụzọ na-enweghị ncheta ga-ebute ogo mmerụ ahụ nke ụma ma ọ bụrụ na mmadụ mara maka nsonaazụ a nke omume mmadụ. Akụkụ buru ibu nke nkuzi Jain nwere ihe ndekọ banyere ụdị ndụ dị iche iche dị na mbara igwe, yana omume karmic nke nwere ike iduga nlọghachi n'ụdị ndị a. Uche nke ebe obibi obibi nke Jainism na-akụzi emeela ka mmasị dị ukwuu na ọdịnala a dị ka ihe enyemaka maka iche echiche banyere ebe obibi (Chapple 2002).
N'ikpeazụ, Jainism nwere usoro nghọta dị mgbagwoju anya nke ekwuru banyere esemokwu nke echiche dịgasị iche iche nke ụwa n'ụdị nkuzi nke mmekọrịta (Long 2009: 117-172). E gosipụtara echiche bụ isi nke ịdị adị n'ezie na ntọala nke ozizi Jain banyere mmekọrịta anekanta-vada. Anekanta-vada pụtara n’ụzọ nkịtị “ozizi na-abụghị otu akụkụ,” ma ọ bụ ozizi nke ịdị mgbagwoju anya nke eziokwu.
Dabere na anekanta-vada, eziokwu dị mgbagwoju anya, ma ọ bụ nwee ọtụtụ akụkụ. Nke ahụ bụ, ihe niile nwere akụkụ na-enweghị njedebe. Enweghị ihe ọ bụla nwere ike belata na otu echiche, dị ka ịdịgide adịgide ma ọ bụ enweghị adịgide. Nkà ihe ọmụma dị ka ọdịnala Hindu Advaita Vedanta bụ nke na-emesi ịdị adị nke otu ihe na-adịgide adịgide ike, na-azọrọ na mgbanwe niile na ụdị dị iche iche bụ echiche na-enweghị isi, ma ọ bụ nkà ihe ọmụma dị ka Buddha, nke na-egosi enweghị ike na ịgọnarị ịdịgide adịgide, bụ "otu akụkụ" (ekanta). Ha na-emesi otu akụkụ nke ahụmịhe ike nke ndị ọzọ niile. Jainism, ka o siri dị, na-ekwusi ike ịdị mkpa nke akụkụ niile nke ahụmịhe, wee na-ekwu na akụkọ ọgụgụ isi zuru oke nke eziokwu ga-enwerịrị akụkụ ndị a niile, na -enweghị nke ọ bụla na ngalaba nro.
Nkwenye a na akụkụ ahụ na-adịgide adịgide na nke na-adịgide adịgide nke ahụmịhe sitere na echiche Jain banyere mkpụrụ obi, ma ọ bụ jiva, nke nwere ọdịdị na-adịgide adịgide, na-agbanwe agbanwe (nke nwere ọ blụ na-enweghị ngwụcha, ume, na uche), na a mgbe niile mgbanwe akụkụ (mgbanwe nke nkwupụta karmic).
Ozizi a sitere na nkwenye Jain na omumu nke Mahavira. Ozizi nke ihe nile nwere akuku enweghi ngwucha sitere na akuku akwukwo nso nke okwu Mahavira, bu nke oji ajua ajuju di iche iche site nirutu aka otutu ihe di n ’ezi okwu, ya na otutu echiche di iche iche nke ajuju di otua puru ibu. zara. Onye ahụ, dịka ọmụmaatụ, Mahavira kwuru na ọ ga - adịru ebighi ebi (ma ọ bụrụ na mmadụ ekwusi okwu ike na mkpụrụ obi adịghị agbanwe agbanwe), na echiche ọzọ, na - adịghị adị ebighi ebi (ọ bụrụ na mmadụ ekwusi ike na akụkụ ahụ mmadụ) wdg.
Otu ihe, nke a kpọtụrụ aha, nke anekantavada, ozizi nke ihe nwere ọtụtụ akụkụ, bụ nayavada, ozizi nke echiche. Dika nkwenye a si di, otutu uzo esi enyocha ndi mmadu dika enwere ya. Ozo, odi uzo di ebighebi, nke neduba ka akowasi ya notu uzo, uzo mgbanwe nke neduba ya ka akowara ya ozo, wdg.) Nka putara ihe ozo. okonkwo.
Syadvada pụtara, n'ụzọ nkịtị, "ma eleghị anya nkuzi," ọ bụ ezie na nsụgharị ka mma bụ "nkwenkwe nke amụma ọnọdụ." Ozizi a, nke ndi ozo ndi ozo putara, bara uru, na nkenke na niile azọrọ nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụ ụgha, dabere n'otú e si kwuo ha. Eziokwu nke nkwuputa ọ bụla na-adabere ma dabere na echiche nke esi mee ya.
A na-akpọkwa ozizi a izu ike, ma ọ bụ ụzọ asaa, n'ihi nkwupụta ya na nkwupụta niile nwere eziokwu asaa nwere ike-ụkpụrụ. Dabere n’otú e si kwado ya, ihe a na-azọrọ nwere ike ịbụ: (1) eziokwu, (2) ụgha, (3) ma eziokwu ma ụgha, (4) enweghị ike ịkọwapụta ya (ma eziokwu ma ụgha, ma eziokwu ma ụgha otu oge na n’otu echiche, na-emebi ụkpụrụ nke enweghị nkwenye), (5) eziokwu na enweghị nkọwa, (6) ụgha na enweghị nkọwa, ma ọ bụ (7) eziokwu, ụgha, na enweghị nkọwa. Site na nghọta nke eziokwu na-arụ ọrụ na nkuzi a, mmadụ nwere ike iji nghọta mee ka azịza dị iche iche nke okpukpe dị iche iche na nkà ihe ọmụma ụwa gbanwee.
A na-ejikọta emume Jain n'ụzọ chiri anya na usoro Jain zuru ụwa ọnụ ma ghọta ya na isi mmalite ederede Jain dị ka ụdị ntụgharị uche, nke e mere iji wepụ karma site na mkpụrụ obi ma zụlite ọnọdụ nke ga-egbochi karma ịbanye. A hụrụ na echiche a, emume Jain dị mkpa na moksha-marga, ma ọ bụ ụzọ maka nnwere onwe. Otú ọ dị, n'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị Jain na-echekwa ihe omume ha nke na-eme ka ọdịmma ụwa dịrị: iji nweta ihe mgbaru ọsọ, dịka ahụike, akụnụba, na ogologo ndụ maka onwe ha na ezinụlọ ha, na ezigbo ọmụmụ (Cort) 2001: 186-202).
N'ikwu okwu, ọtụtụ ememe Jain yiri ka hà nwere otu usoro ndị Hindu. Dị ka ndị Hindu, ọtụtụ ndị Jain na-efe ihe oyiyi, ma ọ bụ murtipuja: ya bu, ife ihe oyiyi ofufe (Murtipujaka) Shvetambaras (ndị mejupụtara ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ọ bụghị naanị nke Shvetambaras, kama ọ bụ nke Jains gburugburu ụwa), na Digambaras. Naanị Shvetambara Terapanthi Jains na Sthanakavasi Jains na-ezere ife ihe oyiyi ofufe. Ofufe ihe oyiyi gụnyere omume ndị dị ka abhishekha, ma ọ bụ mmanụ, nke a na-awụsa ihe ndị dị ọcha dị ka mmiri ara ehi, yogọt, pịrị sandal, na mmiri n’elu ihe oyiyi; arati, nke a na-efe kandụl ma ọ bụ oriọna ndị a na-efegharị n'ihu ihe oyiyi ahụ, na-abụkarị iji sonyere ha ukwe na ịkụ mgbịrịgba; na ịchụrụ ihe oyiyi ahụ nri.
Ebumnuche maka ofufe Jain dị iche na nke Hindu. A ga - ahụ ihe dị iche n ’etiti ha site na nkuzi dị iche iche nke omenaala abụọ a - ụzọ abụọ ọdịnala abụọ si dị ichiiche dị nsọ na mmekọrịta dị n’etiti mmadụ na Chukwu.
Maka Jains, “Chineke” na-ezo aka na mkpụrụ obi nwere onwe. Onye obula nwere onwe ya bu nke bu Chineke - dika ndi Tirthankaras – na ndi nile nwere onwe ha bu otu, ebe nkpuru obi nile nwere otu ihe di nkpa nke ihe omuma, omuma, ume na obi uto. Mkpụrụ obi ndị a abụghị ndị kere ụwa; ma ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ dị ukwuu n'inyere Jains aka maka nnwere onwe, na-enweghị, n'oge gara aga, setịpụrụ nkuzi na omume nke ụzọ wee bido obodo iji mee ka ndị a dịgide. Oringsọpụrụ ihe oyiyi nke onye nweere onwe ya, ma ọ bụ Jina, site na abhishekha na arati, dịka ọmụmaatụ, ya mere, n'ikpeazụ, ịkwanyere chi dị n'ime onwe ya ùgwù. Ọ bụ ụdị ntụgharị uche na nkwenye nke ntinye onwe ya n'okporo ụzọ Jain. Na inye onyinye, egosiputara ihe di egwu nke di na Jain na ndi Hindu. Ndị Hindu na-enye nri n'ụdị chi ma na-eri nri n'etiti onwe ha dị ka prasad, ma ọ bụ amara, ihe nnọchianya nke ngọzi Chineke nke na-abịa site n’ife ofufe. Ofufe Hindu, n’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, bụ ụdị azụmahịa, nke onye na-efe ofufe na-enye otuto na ekele nye Chukwu, na Chukwu, na-enyekwa ngọzi. Otú ọ dị, chi ndị Jain adịghị ka ndị bara uru, adịghị enye ngọzi n'ụdị a. Nye nri nye chi dị iche iche nke Jain ka a ghọtara dịka ụdị nnwere onwe – nke igosi mmadụ ịhapụ ihe nke ụwa a. Ya mere, nri a na-enye chi ndị Jain bụ ọ bụghị nke ndị obodo Jain riri, mana ha ga-ahapụrịrị obodo a - ọ na-abụkarị ọrụ ebere nye ndị ogbenye sitere na mpaghara ndị gbara ya gburugburu (nke, na India, na-abụkarị ndị Hindu) (Babb 1996).
Ememe Jain ndị ọzọ bụ ụdị ntụgharị uche doro anya, dịka caitya-vandan, ememe nke gụnyere ịkpọ isiala nye ihe oyiyi na ịkpọghachi ọtụtụ abụ na mantras site na ederede Jain. Mgbe ịkpọrọ isiala na ọgụgụ a, otu na-eguzo na ntụgharị uche nke dị iche na Jainism, nke a maara kayotsarga. Na kayotsarga, otu na-eguzo “ụkwụ ya dịtụ obere, ogwe aka na-agbadata ma na-agbadata ahụ, aka na-atụgharị, na-elegide anya na-atụgharị uche (Cort 2001: 66). A na-egosipụtakarị ndị nwere onwe ha na ọnọdụ a na Jain art, n'ihi na a kwenyere na ọ bụ ọnọdụ nke Tirthankaras nwetara nnwere onwe. Mgbe ị nọ n'ọdịdị a, otu na-agụchi ya Namokara Mantra, “Ihe kasị nsọ na ebe nile nke otuto nile nke Jain (Cort 2001: 66).”
Nke Murtipujaka Shvetambaras tinye:
Ekpere a dị n’asụsụ Prakrit mgbe ochie nke akwụkwọ Jain. (Prakrits bụ ụdị asụsụ Sanskrit oge gboo, nke sitere n'asụsụ Indian dị n'ebe ugwu n'oge a dị ka Hindi, Bengali, na Gujarati.) Ọ pụtara:
Ana m akpọ isiala n'ihu ndị kwesịrị ekwesị [Jinas ma ọ bụ Tirthankaras].
M na-ehulata n’ihu ndị ahụ e meworo ka ha zuo okè [ndị niile nwetara mgbapụta].
Ana m akpọ isi n’ihu ndị isi iwu Jain.
Ana m akpọ isiala n'ihu ndị nkụzi nke iwu Jain.
Ana m akpọ isi ala n’ihu ascetics niile dị n’ụwa.
Ahịrị ọzọ nke Murtipujaka Shvetambaras gụrụ pụtara:
Ekele a okpukpu ise, nke na-ebibi karma niile, bụ nke kachasị mma, kachasị mma nke ihe niile dị mma (Long 2009: 114-115).
The Namokara Mantra a na-agụghachi ya n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, na mgbakwunye na caitya-vandan, ma eleghị anya, a ga-ejikọ ya na Ekpere Onyenwe Anyị nke Iso Christianityzọ Kraịst. Ọtụtụ Jain na-arụ ọrụ caitya-vandan kwa ụbọchị, yana samayika. Samayika, ma obu , nkwekọrịta, bụ n'ezie, iji zụlite ọnọdụ uche a, nke bụ ihe dị mkpa n'okporo ụzọ Jain maka nnwere onwe. Ọ gụnyere ịtụgharị uche maka oge dịka 48 nkeji (Wiley 2004: 184). Oge a dị nkeji iri anọ na asatọ, nke a maara dịka a muhurta, bụ ọdịnala oge ọdịnala nke ndị India, a na-ejikwa ya n'ihe gbasara ndị Hindu.
Enweghị ikike ọ bụla, nke etiti gọọmentị nke ndị Jain niile debanyere aha. Ihe kachasị dị iche na nke okpukpe bụ na n'etiti ascetics na laypersons. A na-ahụkarị echiche dị ka ndị isi okpukpe kachasị maka Jains, yana echiche nke echiche Jainism. Ọtụtụ ndị Jain na-asọpụrụ ha nke ukwuu, mana a na-ahụkwa ha nke ọma na atụmanya nke ndị nkịtị na ha na-agbaso ụkpụrụ nke ụzọ ndụ ha ahọpụtara dị oke elu.
Jain ascetics na-ahazi ya na ngalaba a maara dị ka gacchas. Gacchas bụ ihe odide obodo, ọ bụ ezie na e nwere gacchas na-emetụta mpaghara ụfọdụ. A na-amata ha dị iche iche site na iche iche aghụghọ na omume ascetic. Ọ bụrụ na esemokwu ebilite n'ime gaccha maka ajụjụ gbasara omume, ọhụụ ọhụrụ na-abụkarị nsonaazụ. O yikarịrị ka ọtụtụ gacchas si dị taa bụ esemokwu dị otú ahụ, yana nkewa nkewa na-esite na njegharị nke ndị mọnk si n'otu ebe ruo ebe. A na-ekewa Gacchas n'ụzọ dị iche iche dị iche iche nke obere karịa nke a maara samudayas, parivaras, na sangha ḍ as (Cort 2001: 41).
N'oge nke oge a, ọkachasị na obodo Jain zuru ụwa ọnụ na mpụga India, mmadụ nwere ike rịba ama ịrị elu dị iche na ndị isi, ọ bụ ezie na enwere ihe akaebe nke ndị nwe ụlọ ama ama na-arụ ọrụ mgbe niile na obodo Jain. Thegba ọsọ nke ụlọ arụsị Jain bụ ihe na-akpata nsogbu mgbe niile, nke, n'oge a, na-ewere ụdị nke kọmitii nke ndị nlekọta nke ndị nyere onyinye a ma ama na ndị dị njikere inye oge na ume ha iji hụ na ịgba ọsọ na-aga n'ihu ntọala na nnyefe nke ụkpụrụ Jain nye ọgbọ ndị na-eto eto.
Typesdị nsogbu abụọ dị ugbu a na-eche obodo Jain ihu, nke enwere ike ịkọwa otu n'ime ya na nke ọzọ dị ka mpụga.
N'ime, e nwere ịrọ òtù. Schism kacha ochie na obodo Jain bụ nke dị n’etiti Shvetambaras na Digambaras. Nkewa a, nke malitere ihe dika narị afọ nke abụọ OA, dabere na nkọwa nke nkwa nke aparigraha, ma ọ bụ enweghị, nke niile Jain ascetics na-ewere na ịbanye n'usoro ndị mọnk. Ndị mọnk Digambara Jain anaghị eyi uwe ọ bụla. Naanị ihe ha nwere bụ obere whisk nke a na-eji peacock feathers mee, nke a na-eji azacha ala ebe onye mọnk na-eje ije ma ọ bụ ohere ọ na-anọdụ ala iji gbochie igbu ụmụ ahụhụ na mberede. N’ezie, nke a bụ mmalite nke okwu a Digambara, ma ọ bụ “yikwasị eluigwe.” Ndị nọn Digambara na-eyi uwe mwụda na-acha ọcha, anaghịkwa ekwe ha mee aparigraha ruo na oke nghọta. Shvetambara, ma ọ bụ Jains “na-acha ọcha ọcha” na-akwado ọdịnala nke ma nwoke ma nwanyị nwanyị na-eyi uwe ndị ọcha dị mfe. Ha na-ahụ aparigraha dịka okwu gbasara omume mmadụ ma ọ bụ omume mmadụ, ọ dịghị mkpa ụdị ịkatọ nnupụisi nke onye mọnk Digambara ahụ gba ọtọ na-egosipụta.
Esemokwu ha banyere mkpa ọ dị ịgba ọtọ ndị mọnk na-ebute ọdịiche ndị ọzọ na nkuzi nke obodo abụọ a. Ebe ọ bụ na ndị Digambara na-ahụ ịgba ọtọ ndị mọnk dị ka ihe dị mkpa maka nnwere onwe site na ịlọ ụwa, na n'ihi na a naghị ekwe ka ụmụ nwanyị soro omume a, ọdịnala Digambara na-akụzi na ka nwanyị wee nwere onwe ya, ọ ga-alọ ụwa dịka nwoke. Shvetambaras jụrụ echiche a, ma jide, dabere na akụkụ Akwụkwọ Nsọ ha, na nne Mahavira na Mallinatha, nke iri na itoolu Tirthankara, bụ ụmụ nwanyị nwetara nnwere onwe. Akụkụ na ndabere a, ndị Digambara anaghị anabata ndaba nke akwụkwọ ederede Shvetambara. Groupstù abụọ nke Jain a na-emesokwa ihe oyiyi a na-efe Jinas, ma ọ bụ ndị nwere nghọta, n'ụzọ dị iche, na Shvetambaras chọrọ ihe oyiyi ha jiri ihe ịchọ mma dị iche iche. Digambaras na-ahapụ ihe oyiyi ha nke Jinas enweghị mma, ma ọ bụ "ịgba ọtọ" (Jaini 1992).
Akụkụ ndị ọzọ bụ isi na obodo Jain mere n'oge ochie. Lonka Shah (ihe dị ka 1400-1500), onye Jain dinara ọkà mmụta na calligrapher na-edegharị akụkụ Akwụkwọ Nsọ Shvetambara, kwenyere dabere na ọmụmụ ya na iji ihe oyiyi, ma ọ bụ murtis, na ofufe mebiri ụkpụrụ nke enweghị ike: ụkpụrụ omume bụ isi nke Jainism (Dundas 2002: 246). Mgbalị ya iji dọpụta Jains murtipuja, ma ọ bụ iji ihe oyiyi efe ofufe, mere ka e nwee ìgwè abụọ nke Shvetambara: Terapanthis na Sthanakavasis.
Terapanthis na Sthanakavasis na-eso Lonka na ịjụ murtipuja, ịmata ọdịiche dị iche na ha na Murtipujaka (ma ọ bụ iji ihe onyonyo) Shvetambaras. Ihe dị iche n'etiti Terapanthis na Sthanakavasis bụ na mbụ na-eji ebe obibi ndị mọnk, ebe Sthanakavasis kwenyere na ibi n'ebe obibi ndị mọnk, kwa, gụnyere imebi nke enweghị ike (n'ihi ime ihe ike metụtara iwulite ihe owuwu), yana ịmepụta mgbakwunye na akpan akpan ebietidụn̄.
N'ime oge ahụ ka mmalite nke Terapanthis na Sthanakavasis si obodo Shvetambara, nkewa pụtara na mgbago ugwu Digambara n'okwu banyere bhattarakas. Bhattarakas bụ ndị mọnk na-arụ ọrụ na ebe obibi ndị mọnk iji soro ndị nkịtị na-emekọrịta ihe ma na-ahụ maka okwu nhazi. Iji zere iwe iwe ma ọ bụ ịdọrọ uche nke onwe ha mgbe ha na ndị nkịtị na-emekọ ihe, bhattarakas anaghị ahụ ọdịnala ndị Digambara nke ndị mọnk, kama ị na-eyi uwe mwụda dị mfe. Hụ iji bhattarakas dị ka mmebi iwu ọdịnala Digambara ascetic, otu Digambara Jains guzobere obodo dị iche, nke a maara dị ka Terapanthis (ndị na-agaghị enwe mgbagwoju anya na ndị na-abụghị ndị na-eji ihe oyiyi Shvetambara nke otu aha). A na-akpọ ugwu Digambaras ndị ahụ na-ajụghị iji bhattarakas akpọ Bisapanthis. E kewaghị Digambaras nke ndịda ma jiri bhattarakas.
Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke Jains, ọkachasị na mpụga nke India, na-ekwupụta ịkpa ókè dị na Jain dị ka ihe na-emebi ihe mgbaru ọsọ siri ike nke ịkwalite ụkpụrụ Jain n'ụwa niile. Nkwupụta nke mmadụ na-anụkarị bụ na ọ bụ ihe ihere maka obere obodo dị otu a, ọkachasị nke ewepụtara maka udo na enweghị ike, nkewa kewara site na nghọtahie maka omume na nwe ụlọ nke temple na ebe njem. Otu ụzọ Jain nke oge a si aluso ịrọ òtù bụ ịmepe ụlọ ọrụ ndị na-abụghị nke ịkekọrịta, ma ọ bụ nke ụdị "Jain niile". Suchlọ ọrụ abụọ dị otú ahụ bụ Siddhachalam, nke onye mọnk Sushil Kumar guzobere na Blairstown, New Jersey na 1983, na International Summer School of Jain Studies, na India, nke na-akwado ụmụ akwụkwọ kọleji, ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, na ndị prọfesọ sitere n'ọtụtụ mba wee gaa. ọtụtụ ụlọ ọrụ Jain, na-agafe ókèala nkewa ma na-enye ụmụ akwụkwọ echiche nke ọtụtụ ụdị Jainism.
Na mpụga, ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke Jain na-ahụ ihe ịma aka na-eche mmadụ niile - dị ka mmebi gburugburu ebe obibi, agha, iyi ọha egwu, na esemokwu okpukpe-dị ka nsogbu nke achọrọ nzaghachi Jain n'ụzọ doro anya. Suchdị ntụgharị uche nke ụwa a n'akụkụ nke okpukperechi bụ nke ọdịnala na-agabiga ụwa karịa ịgbanwe ya - "Jainism nwere mmekọ" yiri nke a, n'ọtụtụ ụzọ, itinye aka n'okpukpe Buddha - na-egosi mgbanwe na ụzọ Jainism si eche echiche site n'aka ndị na-eso ụzọ ya (Chapple 2002: 98-99). Ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị ọkà mmụta a na-ebulighị na omenala Jain amalitewokwa ịhụ ọdịnala a dị ka ihe ọmụma ọgụgụ isi, ma maka ihe ọmụmụ dị omimi na ọtụtụ okpukpe (Chapple 1993 na 2002; Long 2009: 117-72; Tobias 1991). N'ihe banyere otutu ihe banyere okpukpe, ihe ndi Jain na-akpokarita bu ndi nkuzi nke ikwu banyere ha n'elu (anekantavada, naya-vada, na okonkwo). N'ihe banyere usoro ihe omumu miri emi, usoro Jain a na-akpokarita bu nkuzi Parasparopagraho Jivanam, nke pụtara n’ụzọ nkịtị “ihe ndị dị ndụ na-enyere ibe ha aka,” ma a na-asụgharịkarị ya dị ka njikọrịta ma ọ bụ ijikọrịta onwe ha. Principlekpụrụ a na-amata na ụdị ihe niile dị ndụ na mbara igwe a na-ejikọ ọnụ site na nkwado na ntụkwasị obi. ” (Dr. Sulekh Jain, nkwukọrịta onwe onye).
Babb, Lawrence A. 1996. Onye nwe na-anọghị: Ascetics and Kings in a Jain Ritual Culture. Berkeley, CA: Mahadum California Press.
Bronkhorst, Johannes. 2007. Greater Magadha: Nnyocha na Omenala nke India Mbụ. Leiden: Ọhụụ.
Chapple, Christopher Key. 1993. Anaghị emegbu anụmanụ, Earthwa, na Onwe ya na ọdịnala Eshia. Albany, NY: University University of New York Press.
Chapple, Christopher Key. 2002. Jainism na Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ: Ọdịghị na Web nke Ndụ. Cambridge, MA: Mahadum Harvard University.
Chapple, Christopher Key. 2003. Idozi Yogas: Nchịkọta Echiche nke Haribhadra na Yoga. Albany, NY: University University of New York Press.
Onyekachi, John. 1998. Bokèala mepere emepe: obodo Jain na omenaala ndị India. Albany, NY: University University of New York Press.
Onyekachi, John. 2001. Jains n'ime ụwa: Religkpụrụ okpukpe na echiche banyere India. Oxford: Oxford University Press.
Dundas, Paul. 2002. Ndị Jains. London: Routledge.
Jaini, Padmanabh S. 1979. Jzọ Jaina nke Ọcha. Delhi: Motilal Banarsidass.
Jaini, Padmanabh S. 1992. Gender na Salvation: arụmụka Jaina na nnwere onwe ime mmụọ nke ụmụ nwanyị. Delhi: Munshiram Manoharlal.
Jaini, Padmanabh S. 2000. Achịkọtara Akwụkwọ na Jaina Studies. Delhi: Motilal Banarsidass.
Kelting, Whitney M. 2005. Singbụ abụ na Jinas: Jain Laywomen, Mandal Singing, na Mkparịta ụka nke Jain Devotion. New York: Oxford University Press.
Ogologo, Jeffery D. 2009. Jainism: Okwu Mmalite. London: IB Tauris.
Parikh, Vastupal. 2002. Jainism na Ọnọdụ Ime Mmụọ Ọhụrụ. Toronto: Akwụkwọ udo.
Tatia, Nathmal (trans.). 1994. Nke Bụ: Tattvartha Sutra. San Francisco: Harper Collins.
Tobias, Michael. 1991. Ndụ Ike: ofwa nke Jainism. Fremont, CA: ainlọ Ọrụ Na-ekwusara Jain.
Anne, Anne. 2002. Ndị nche nke transcendent: otu agbụrụ nke Jain Ascetic Community. Toronto: Mahadum nke Toronto Press.
Wiley, Kristi. 2004. Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke Jainism. Lanham, MD: Scarecrow Press.